နွေလင်းဟန် တင်ဆက်တဲ့ တောကဘကြီးရဲ့ “တူမောင်ကြီးထံပေးစာ” ကဏ္ဍ အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်… – PVTV Myanmar
နွေလင်းဟန် တင်ဆက်တဲ့ တောကဘကြီးရဲ့ “တူမောင်ကြီးထံပေးစာ” ကဏ္ဍ အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက် ဓါတ်တိုင်စာကပ်တဲ့ ဂျပုတပ်မတော် အကြောင်းကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 17K Share – 2948
2021-09-02 at 8:56 AM
ေတာကဘျကီးအတြက္ တူေမာင္ျကီးက တတ္တြင္ ရက္လည္ဆြမ္း မုန့္ဟင္းခါးေလး ပို့လိုက္ပါတယ္ တူေမာင္ျကီး မအလ ရက္လည္ျကရင္လည္ ကကလွ ကိုတိုင္ခ်က္တဲ့ မုန့္ဟင္းခါး ေကာ ပို့ခိုင္းလိုက္ပါမယ္ ေတာက ဘျကီး မိန္ေရ ရွက္ေရ စားသံုးပါဗ်ာ
2021-09-02 at 10:19 AM
မုန့်ဟင်းခါးကြိုက်တဲ့ ငါ..ဒီအချိန်မှာတပ်မိသားစုတွေနဲ့မရင်းနီးတာ နာတယ်ကွာ၊🙄🙄
မခိုင္ မခိုင္ says:
2021-09-03 at 10:19 AM
2021-09-03 at 2:12 PM
ပူစရာ မလို ဘတ်ဂျက် ရှာတာ
လွယ် ပါ့ ဗျာ
AChit Laypyae says:
Myint Maw says:
အံုး. ဒိုင္. ဂြမ္း..ငွက္ေပ်ာျခံ.
Hein Kyaw Kyaw says:
Ko Thar Gyi says:
Ko Zawip says:
2021-09-07 at 7:49 PM
အရင်ကတည်ကကြိိုက်တယ်အခုဆိုပိုကြိုက်သွားပိလေအုံး ဒို်င်း ဂွမ်း ငှက်ပြောခြံ
ေတာသား ေလး says:
2021-09-08 at 10:28 AM
2021-09-08 at 8:12 PM